Uyilungisa njani iVidiyo yeYouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyilungisa njani ividiyo yeYouTube?
Meyi 5, 2021 0 IiCententarios 319
Ngakumbi nangakumbi abantu bayakhuthazwa ukuba benze umxholo weqonga leYouTube. Kwaye ngaphandle kwamathandabuzo oku kunjalo Esinye sezixhobo ezilungileyo ezinabasebenzisi kule mihla, ngakumbi abo banomdla kwihlabathi elinamazwi.
Ukuba ucinga ngombono wokuqala ukwenza umxholo weYouTube, eyona nto intle iya kuba njalo yiya ufuna umhleli wevidiyo olungileyo. Kwi-intanethi zininzi iindlela onokukhetha kuzo. Kwinqaku elilandelayo sichaza amanye amanqaku ukuba siwakhumbule xa uhlela ividiyo yeli qonga.
Izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa uhlela ividiyo yeYouTube
Ngaphambi kokuba ndikuxelele ngezinye zeenkqubo ezilungileyo ezikhoyo zokuhlela iividiyo zeYouTube kubalulekile ukuthathela ingqalelo imiba ethile ephambili oko kuya kukunceda wenze umsebenzi ongcono.
Okokuqala kubalulekile umxholo okomgangathoOko kukuthi, ividiyo inesisombululo esihle somfanekiso, isandi kunye nokukhanya. Nangona le miba inokuphuculwa ekuhleleni, kungcono ukuzisa umxholo osemgangathweni kwasekuqaleni.
Khetha inkqubo elungileyo yokuhlela ikwabalulekile. Ezona nkqubo zibalulekileyo zihlawulwe, nangona kunjalo kukho iindlela zasimahla ezinokuba luncedo kakhulu. Chitha ixesha ufumana inkqubo elungileyo yokuhlela.
Amanyathelo okuhlela ividiyo ye-YouTube
Ukufunda ukuhlela ividiyo ye-YouTube akukho nzima kangako njengoko ucinga ngokuqinisekileyo. Uya kudinga umonde omncinci, ixesha kunye nomnqweno wokwenza umsebenzi obalaseleyo. Amanye amanyathelo ekufuneka uwalandele ngala:
Khetha umhleli wevidiyo ohlangabezana neemfuno zakho
Qala ngemveliso yokuhlela
Faka i iziphumo ezikhethekileyo ufunani
Khetha ifomathi efanelekileyo yevidiyo yakho
Layisha kwisiteshi sakho se-Youtube
Khetha umhleli wevidiyo olungileyo
Ininzi yempumelelo ikweli nqanaba. Ukuba sifuna umxholo womgangatho, kungcono ukhethe iinkqubo zokuhlela ezisemgangathweni. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zabahleli bevidiyo onokufikelela kuzo, ezinye zihlawulwe kwaye ezinye zisimahla.
Abahleli abahlawulwayo babandakanya amanqaku amaninzi, nangona ezinye zasimahla zikwindlela efanelekileyo. Ukuba uqala kuhlelo, eyona nto icetyiswayo iya kuba kukukhetha yasimahla ekunceda ukuba ugqibelele uhlelo lwakho.
Kwiwebhu Ungafumana iinkqubo zokuhlela ukufaka kwiPC yakho, kodwa kukwakho nabahleli be-Intanethi, oko kukuthi, abadingi kufakelwa ukuze kusetyenziswe.
Hlela ividiyo kwaye ungeze iziphumo ozifunayo
Inyathelo lokuqala lokuhlela ividiyo ye-YouTube kukufikelela kwinkqubo yokuhlela. Emva koko kufuneka Qalisa inkqubo yokuvelisa, Okubandakanya ukusika ezo zigcawu kwividiyo esingazifuniyo, ukulungelelanisa umgangatho womfanekiso, ukuphucula isandi kunye noluhlu lwezinto.
Emva kokuba zonke izigcawu zidibeneyo Lixesha lokuba ungeze iziphumo ezizodwa kwividiyo yethu. Apha ungadlala ngengcinga yakho: Yongeza iifilitha, izicatshulwa, imifanekiso ... Yonke into ocinga ukuba ilungele ukuqaqambisa imveliso yakho.
Khetha ifomathi kwaye uyilayishe kwisitishi sakho
Ngaphambi kokukhuphela ividiyo ehleliweyo kubalulekile khetha ifomathi esifuna ukuba ifayile ibe yiyo. Khetha ifomati efanelekileyo ngokufanelekileyo kwiimfuno zakho kwaye uyigcine. Emva koko, ekuphela kwento eseleyo kukuyilayisha kwisitishi se-YouTube.
1 Izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa uhlela ividiyo yeYouTube
2 Amanyathelo okuhlela ividiyo ye-YouTube
3 Khetha umhleli wevidiyo olungileyo
4 Hlela ividiyo kwaye ungeze iziphumo ozifunayo
5 Khetha ifomathi kwaye uyilayishe kwisitishi sakho
Ndihamba njani kwiTwitch kwiPS4 yam?
Ndifuna ukwazi ukuba iTwitch ihlawula njani?